တနင်္ဂနွေနေ့ဆို ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ရှိတတ်တဲ့ Myanmar BMX Riders အဖွဲ့နဲ့ စကားစမြည်း။ – Bikes in Ygn
Bikes in Ygn
Bikes are hidden in Yangon. Yangon forgot to pay attention to bikes. To remind Yangon about bikes.
တနင်္ဂနွေနေ့ဆို ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ရှိတတ်တဲ့ Myanmar BMX Riders အဖွဲ့နဲ့ စကားစမြည်း။
Myanmar BMX Riders ကိုဖွဲ့ထားတာ သိပ်တော့ မကြာသေးဘူး။ တစ်နှစ်တော့ မပြည့်သေးဘူး။ ဝါသနာတူလေးတွေ စုပြီး လုပ်ဖြစ်သွားတာ။
BMX ကတခြားဘီတွေနဲ့မတူတာက သူက ဆော့တဲ့ဘီး။ စီးတဲ့ဘီးမဟုတ်ဘူး။ BMX စတန့် ပေါ့။ အဲ့အဒါကြောင့် ဖင်ထိုင်ခုံလည်း အနိမ့်ထားထားတာ။ စတန့် ဦးစားပေးပေါ့။
အရင်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ မောင်းတိန်းဘီးလေးတွေ စီးတယ်။ BMX စီးတာက မကြာသေးဘူး။ နှစ်နှစ်လောက်တောင် မပြည့်သေးဘူး။ အဓိကတော့ အင်တာနက်က ဗွီဒီယို တွေကြည့့်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ ဗွီဒီယို တွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ပြောမယ်ဆို တစ်ခုပြီး တစ်ခုပါပဲ။
လူတွေက အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ဘီးတန်ဖိုးကြီးတာတွေ ဝယ်ပြီး အိမ်ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့သူတို့၊ သူ့ဘီးကို လှဲထားရင် မကြိုက်တဲ့သူတို့ တွေ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘီးဆိုတဲ့အရာကို သေနေမဲ့အရာထက် စီးရမယ့်အရာလို့ပြောချင်တယ်။ ဥပမာ BMXဆို စီးပြီး စတန့်ဆော့မှ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ပုံစံပေါ်တယ်လေ။
ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်းဆော့ဖြစ်တာကတော့ လှည်းတန်းစကိတ်ကွင်းနားက ခြံစည်းရိုးခတ်ထားတဲ့ ကွက်လပ်မှာဆော့ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါ တနင်္ဂနွေနေ့ဆို ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကို လာတယယ်။ ကျန်တဲ့နေ့တွေကတော့ စကိတ်ကွင်းဘေးနားမှာပဲရှိတယ်။
၁၀၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆
don't forgot to pay attention on bikes in yangon!!!
February 6, 2016 by ZwePyae